Alim-bolan'ny alim-bary fanaovana sary mivoaka an-tsokosoko sy mpamatsy | Ouzhan
Ny fanaovana sary an-tariby dia azo atao varimbazaha mahitsy, voamaina tampoka, kofehy, varimbazaha ary varimbazaha mifanaraka amin'ny filan'ny haingo.
Ny fizotran'ny sary amin'ny alimo alimo
Saripika tariby mahitsy
Manondro ny famolavolana tsipika mahitsy eo ambonin'ny takelaka aluminium amin'ny alàlan'ny fikorontanana mekanika.
Izy io dia manana ny asan'ny roa amin'ny famongorana ny gorodona eo ambonin'ny takelaka aluminium ary manamboatra ny tampon'ny takelaka aluminium. Misy karazany roa ny fanaovana tariby tariby mahitsy: tariby mitohy sy tariby mitohy. Ny lamina mitohy dia azo raisina amin'ny fikosehana pads na borosy vy tsy misy fangarony amin'ny alàlan'ny fikosehana tsipika mahitsy mitohy eo ambonin'ny takelaka aluminium (toy ny fikolokoloana tanana eo ambanin'ilay fitaovana efa misy na amin'ny fampiasana planer iray hampanginana ny borosy tariby amin'ny lovia aluminium) . Amin'ny alàlan'ny fanovana ny savaivon'ny tariby vita amin'ny vy boribory dia azo alaina ny firafitry ny hateviny samihafa. Ny lamina vita amin'ny landy miparitaka matetika dia voahodina amin'ny milina fanosotra na milina fanosotra. Fitsipika famokarana: kodiarana roa samy hafa mihodina amin'ny lalana iray ihany no ampiasaina. Ny ambony set dia roller mihodina haingana, ary ny ambany kosa dia roller mihodina miadana. Ny takelaka vita amin'ny aliminioma na alimika dia mamakivaky ireo andiana roolahy roa ary kosehina hiala. Tsipika mahitsy mifampitohy.
Fanoritsoritana sary tsy miovaova
Izy io dia lamina landy tsy ara-dalàna tsy mazava loatra azo avy amin'ny famindrana sy fikosehana ny takelaka alimina mandroso sy miverina eo ambanin'ny borosy tariby varahina haingam-pandeha. Ity karazana fanodinana ity dia manana takiana ambonimbony kokoa eo ambonin'ny takelaka firaka vita amin'ny aliminioma na aliminioma.
Amin'ny ankapobeny dia vita amin'ny milina fanosotra na milina fanosotra izy io. Ampiasao ny hetsika axial an'ny vondrona ambony amin'ny fikosoham-bolo mba hikororohana ny tampon'ny takelaka aliminioma na alimika, Manaova sarina lamina onja.
Izy io dia antsoina koa hoe fihodinan'ny optika, izay karazana lamina landy azo amin'ny alàlan'ny fampiasana tsindrona varingarina na familiana kodiarana nilona hametrahana milina fandavahana, fampifangaroana menaka poloney amin'ny solitany, ary fihodinana sy fanosorana ny vaton'ny takelaka alimina na aliminioma. Ampiasaina matetika amin'ny fikarakarana haingon-tsoratry ny famantarana boribory sy ny dialy haingon-trano kely.
Mampiasa motera kely misy tsapa boribory eo amin'ilay hazo izy ary manamboatra azy eo ambonin'ny latabatra, manodidina ny 60 degre eo an-tsisin'ny latabatra.
Ankoatr'izay dia vita ny paleta iray misy takelaka alimina raikitra ho an'ny dite fanindriana, ary sarimihetsika polyester misy sisiny mahitsy no apetaka amin'ny paleta hamerana ny fifaninanana kofehy. Amin'ny fampiasana ny fihodinan'ny tsapa sy ny fivezivezena amin'ny kalesy, ny lamina kofehy iray mitovy sakany dia kosehina eo ambonin'ny takelaka aluminium.
Ny andraikitry ny sary sokitra tariby alimo
Ny vokany azo avy amin'ny fanaovana sary an-tariby dia hisy vokany mivaingana sy mivaingana tsara. Ny fanaovana sary an-tariby dia dingana fanamboarana. Satria misy gorodona eo amin'ny metaly, ampiasao milina fanaovana tariby hanaovana gorodona tsy miova amin'ny faritra manontolo (mampihena ny hatevin'ny rindrina) --- manarona ireo rangotra, tsara kokoa raha tsy (voahodina Rehefa avy nanamafy ny asa, hiova izany ny fampisehoana). Saingy sarotra ny misoroka ny vay, ka matetika no ampiasaina. Ny fanaovana sary dia tsy miborosy ny gorodona eo ambonin'ny lovia vita amin'ny aliminioma fotsiny, fa misy vokany amin'ny fanatsarana ny endrik'ilay takelaka aluminium. (Misy ihany koa ny fizotran'ny "stamping mafana" (famindrana alimika anodized), izay mety hisy vokany mitovy amin'ny ambonin'ireo faritra plastika.)
Satria ny ampahany amin'ny aliminioma dia mety amin'ny tontolo iainana mando na mivory miaraka amin'ny faritra hafa amin'ny fitaovana samihafa, mba hanatsarana sy hiantohana ny fanoherana ny fitafiana, fanoherana ny harafesina ary fahitana ireo faritra, ny ampahany amin'ny alikaola manezioma dia tokony hokolokoloina. Ny pretreatment dia hisy fiantraikany amin'ny fanenjehana manaraka. Mandritra ny dingan'ny famokarana, ny faritra dia mety ho voaloton'ny fandotoana sasany toy ny menaka, oksida, fanosotra ary zavatra avy any ivelany, ary tsy maintsy esorina ireo loto sisa tavela ireo.
Amin'ny ankapobeny, ny fanamboarana ny ampahany amin'ny aliminioma dia azo zaraina ho sokajy efatra: fanadiovana mekanika, fanadiovana solvent, fanadiovan-kena, ary fanadiovana asidra. Ireo fomba ireo dia azo ampiasaina irery na miaraka. Tandremo ny famatsiana vovo-dronono sy rano mandritry ny fizotran'ny famolavolana, ary tokony hamirapiratra tokoa ny poloney!
Material Aluminium, vy tsy misy fangarony ary fitaovana metaly hafa dia azo kosehina sy voadio
Fampiasana Araka ny fepetra takiana amin'ny fitsaboana hafanana samihafa
Previous: Black anodized faritra 6061-T6 firaka vita amin'ny alimina aluminium
Manaraka: Sombin-tsolika vita amin'ny alimina alim-pito